अहिले मौसम परिवर्तनको समय चलिरहदा स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न ‘घरेलु एन्टिबायोटिक’ - ज्ञानविज्ञान
अहिले धेरै अनुसन्धानहरुले ल्वाङले ईकोलाई जस्ता खतरनाक ब्याक्टेरियाहरूको विरूद्ध क्लोभ पानी निकाल्ने अर्थात् ल्वाङलाई पानी पनि धेरै प्रभावकारी छ । तसर्थ, ल्वाङ पनि एक प्राकृतिक एन्टिबायोटिकको रूपमा देख्न सकिन्छ ।
अहिले चिसो मौसम सुरु भएको छ । गर्मी महिना सकिएर विस्तारै जाडो बढ्दै गएसँगै रुघा खोकि र चिसोका कारण आउने समस्याहरु देखा पर्न थालेको छ । मौसम परिवर्तन हुँदा शरीरले पनि प्रतिक्रिया जनाउँछ । शरीरले प्रतिक्रिया जनाउनु भनेको रुघा,खोकी लाग्नु, नाक बन्द हुँनु घाँटीमा टन्सिल हुनु आदि हो । मौसम परिवर्तनको समयमा सामान्य रुघाखोकी लाग्दा आत्ति हाल्नु पर्दैन । मौसम परिवर्तनको समयमा लाग्ने रुघाखोकीबाट बच्न घरेलु उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
जाडोयाम सुरु हुनासाथ, मौसममा आएको परिवर्तनका कारण रुघा–खोकीको समस्या देखिन थाल्छ । घाँटी खसखस हुनु, नाक बन्द हुनु, नाकबाट पानी बग्नु, रुघाखोकी आदि यो मौसममा देखिने सामान्य समस्या हुन् । बूढापाका, बालबालिका र जटिल स्वास्थ्यस्थिति भएकाहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरूले सामान्य रुघाखोकी हुँदा पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
तर स्वस्थ व्यक्तिलाई जाडोयाममा सामान्य रुघाखोकी लागे हाम्रा पुर्खाहरूले परापूर्वकालदेखि अपनाउँदै आएका घरेलु उपायबाटै सन्चो हुन सक्छ । जाडोयाममा स्वस्थ व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने रुघाका लागि हाम्रो घरदैलोमै पाइने जडीबुटी आदिको उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । ‘तुलसीको पात सामान्य रुघाखोकीका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार हो,’ डा. ऋषिराम कोइराला भन्छन्, ‘यसले भाइरसलाई समेत निष्क्रिय पार्छ ।’ तुलसीको पात चपाउनाले वा चियाजस्तो पकाएर खानाले रुघा निको हुन्छ ।
यो मौसममा रुघा प्रभावितले दिनहु दुईतीन पटक र सामान्य व्यक्तिले समेत एक पटक तुलसीपात, बेसार, अदुवालाई चियाजस्तै पकाएर महको साथ सेवन गर्नाले धेरै फाइदा पुग्छ । धेरै खोकी भए ज्वानो पकाएर पिउँदा खोकी निको हुनुका साथ खकार आदि समेत शरीरबाहिर निस्किन्छ । ज्वानो र अदुवा हालेर उमालेको पानीको बाफ लिँदा नाक खुल्छ, घाँटीको खसखस दुईतीन दिनमै निको हुन्छ । यस्तै बेसार, मह, अदुवा चपाइरहँदा पनि फाइदा गर्छ ।
किन जाडोमा धेरै रुघाखोकी लाग्छ, जोगिने कसरी?
किनकी नाक, कान र घाँटीले एक आपसमा असर पारिरहेका हुन्छन्। बालबालिकाको हकमा त अझै ध्यान दिनुपर्छ। यदि बालबालिकालाई रुघाखोकी लागेको बेलामा कानमा पनि समस्या देखियो भने चिकित्सककहाँ जानुपर्छ। रुघाखोकी लाग्दा जे पनि बार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो गलत हो। रुघाखोकी लाग्दा बारेन भने टाइफाइड हुन्छ भन्ने होइन। झोलिलो र तागतिलो खाना सबै खान हुन्छ। तर एकदमै चिसो चिल्लो पिरो खानु हुँदैन। जुन खानाले अन्यलाई पनि असर गर्छ त्यो खान हुँदैन ।
Don't Miss it होली पर्वमा बच्चादेखि वृद्धहरुसम्म सबै जना एक-अर्कालाई रंग लगाउन मन पराउँछन् । तर होलीमा घातक हुनसक्छ यस्ता रंगहरु
Up Next स्वास्थ्य विमाप्रति हामी त्यती जागरुक छैनौं । त्यसैले कुन अवस्थामा, कसरी स्वास्थ्य विमा गर्ने ? विमा गर्नुअघि के कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारे जानिराखाै